Qoraalo la xushey oo Afsoomali ku qoran - ICRC
Qoraalo la xushey oo Afsoomali ku qoran	Muqaal/ Fiidiyo Soomaaliya: Wadada Gaaban ee Is-Shaqaaleynta. Tababarka Xirfadda ee ICRC
Soomaliya: Carurrta ka soo kabatay nafaqo-darrada
Soomaliya : Isbitaal kusugan qatar joogto ah oo kaalkalineya bukaan
Qoraalo la xushey ICRC- da ee Soomaliya	Dalka Soomaaliya, Hayadda Caalamiga ah ee Laanqeyta Cas (ICRC) oo
kaashaneysa Ururka Bisha Cas ee Soomaaliyeed waxay ka jawaabtaa baahida dhibanayaasha dagaalada oo inta badan ay sii adkeeyaan masiibooyinka dabiiciga ah.
Soomaaliya: Gobolada koonfureed dad badan ayaa weli la ildaran xaalad cunto yari ah	Guddiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas (ICRC) ayaa waxay hadda gabagabeysey inay cunto iyo abuur u qaybiso in kabadan 170,000 qof oo ku nool gobollada Jubadda Hoose iyo Gedo ee koonfurta Soomaaliya. Dadka ku nool goboladan waxay weli yihiin kuwa nugul iyadoo ay ugu wacan tahay xilli roobaad liita iyo colaada socota.
Soomaaliya: Caruurta colaadahuhu ay saameeyeen oo la siiyay quudin dheeri ah magaalada Xuddur	Ku dhowaad 2000 oo caruurta nugul ee magaalada Xuddur, gobolka Bakool ee Soomaaliya ayaa waxay kaalmo deg deg oo quudinta dheeriga ah ka heleen Guddiga Caalamiga ee Laanqeyrta Cas. Dhowrkii bilood ee ugu dambeeyay,magaalada Xuddur iyo hareereheeda waxaa si weyn u saameeyay colaadaha ka socda Soomaaliya. Dadaalada samafaleed ka Sakow, sandaka 2012-ka weli waa mid Caqabado wata	Dadka Soomaaliyeed weli waxay la kulmayaan caqabo cunto yaraan iyo colaad ah lixdii bilood ee ugu horeysey sanadka 2012-ka. Ka sakow xaaladaha adag, Guddiga Caalamiga ee Laanqeyrta Cas, ICRC, waxay raashin u qeybisay 1.4 milyan dad ah oo ku sugan dalka tan iyo horaantii sanadka.
Somalia: Gargaar Cunto oo la Siiyey 420,000 Qof oo Muqdisho ku Nool	Geneva/Nairobi (ICRC) – 420,000 qof oo aad u nugul oo ay ku jiraan qoysas barakacayaal, agoon, dad da' ah iyo dadka naafada ah oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxaa la siiyey gargaar cunto aasaasi ah oo kufilan mudo bil ah.
Soomaaliya: Ka go’an dib u soo celinta kaabiyaasha Nolosha	Sanad ka dib abaartii ba’neyd ee ku habsatay dalka Soomaaliya, Maxamed Sheekh Cali oo ah isu duwaha mashaariicda sugnaanta dhaqaale ee ICRC-da ee dalka ayaa wuxuu sharaxaad ka bixinayaa xaaladaha nafaqo iyo asalka waxyaabaha sababa nafaqodarada. Wuxuu ka hadlayaa sida ICRC-da ay ugu jawaab bixineysay baahida deg deg ah iyo kuwa fogba
Soomaaliya: Ka tarjumeysa isku filnaansho	In ka badan labaatan sanno, colaad, nabadgelyo xumo iyo sharci darro baahsan ayaa waxay sii xumeeyaan qalalaasaha aadaninimo ee Soomaaliya. Intaas waxaa dheer, abaaro soo noqnoqday iyo qiimaha cuntada iyo shidaalka oo sare u kacsan ayaa waxay sababeen sugnaan
la’aan cuntada ah iyo hubaal la’aan nafaqada ah meelo badan.
Somalia: Collaada iyo Roob Yarida Waxay Dheereeyeen Sugnaan La’aanta Cuntada	Gudiga Caalamiga ah ee Laanqeyrta Cas waxay ka walaacsan tahay xaalada qeybo badan oo ka tirsan bulshada Soomaaliyeed, kuwaaso weli u nugul cunto yari sanad ka dib markii ay bilaabatey abaarta. Xaalada ayaa u muuqata mid sii jiri doonto iyadoo ugu wacan tahay abaarta iyo colaadaha socda oo isbiirsadey.
Hordhac	20 sano, Isbitaalka Keysanay ee Muqdisho ayaa bixinayey adeeg caafimaad oo qaliinada dhaawacyada degdega ah oo ay si isku mid ah uga faaiidaysanayeen shacabka soomaaliyeed iyo dagaalyahanaduba.
Somalia: Halkan waxaan u joognaa in aan nolol ama naf badbaadino	Wuxuu ku yaalaa ama dhacaa waqooyiga caasimada, Isbitaalka Keysaney wuxuu ka kooban yahay 90 sariirood iyo qol qaliin oo si wanaagsan u qalabaysan. Laanqayrta Cas ayaa furtay 1992 oo weliba tababartay shaqaalaha isbitaalka; Isbitaalka waxaa lagu wareejiyey Bisha Cas ee Soomaaliyeed 1995tii kaasoo ay Bisha Casi gacanta ku haysay ilaa iyo hadda inkasta oo ay ICRCdu taageeraysay.
Somalia: 20 sano oo qaliin dagaal ah isbitaalka Keysanay, Muqdisho	20 sano, Isbitaalka Keysanay ee Muqdisho ayaa bixinayey adeeg
caafimaad oo qaliinada dhaawacyada degdega ah oo ay si isku mid ah uga
faaiidaysanayeen shacabka soomaaliyeed iyo dagaalyahanaduba.